Ifulethi Lonwabele ukuya kuthi ga kwi-3 yabantu abanebhedi
Apartment Happy has a bathroom with shower, sink and toilet (ihairdryer, toiletries, towels, bath towels, bathrobes), ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, itafile yokutyela kunye nezitulo, igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini 180x200 cm, iitafile ezisecaleni kwebhedi kunye nezibane, igumbi lokuhamba elibanzi. wardrobe, flat screen TV kunye nebhedi yesofa (ibhedi, amashiti). Unokuthatha isitshixo kwindlu kwindawo ekhuselekileyo, ikhowudi yokhuseleko iya kuthunyelwa ngomyalezo wombhalo.
Ikhaya leBluestars apho ifulethi likhona libonelela ngamagumbi akumgangatho ongaphezulu kunye naxhotyiswe ngokupheleleyo ngexesha elifutshane nelide lokuhlala abantu ababini nangaphezulu. (ukuya kwiindwendwe ze-27) Ukuqhayisa igadi kunye neendawo zokupaka zangasese, ipropati ifumaneka e-Stará Rola, iikhilomitha ezi-4 ukusuka kumbindi wedolophu ye-spa yaseKarlovy Vary. Awunakuncoma kuphela izikhumbuzo ezintle kumbindi wesixeko, kodwa nakwindawo ekufutshane nayo (iCawe yase-Ascension yi-200 m kuphela ukusuka eKhaya). Ehlotyeni ungandwendwela indawo yokuzonwabisa iRolava (ukuqubha, iminyhadala yenkcubeko, imidyarho, iminyhadala yezemidlalo, intenetya, ibhola yevoli yaselwandle, umkhondo ongaphakathi, ukurenta iimpahla zemidlalo ...)
Kummandla okufutshane wamagumbi kukho indawo yokuzilibazisa iRolava (umkhondo we-inline, iinkundla zentenetya, ukuqubha ngaphandle, ukurenta izixhobo zezemidlalo, iimarathoni, imidlalo kunye nemicimbi yenkcubeko), iCawe ye-Assumption, iindawo zokutyela ezininzi kunye nemivalo, i-bowling, i-disco.
Kummandla wamagumbi kukho iKarlovy Vary Spa, iMill Colonnade, iMarket Colonnade, iGarden Colonnade, iHot Spring Colonnade, i-12 yemithombo yokuphilisa (yeyona ndawo inkulu yemithombo yokuphilisa emhlabeni), iHot Spring, Castle Tower, Imperial Spa, Spa III. ., Elizabeth Spa, eqingqiweyo ezinqabileyo, imibono, iipaki, amahlathi Spa, iqela iindlela umjikelo, Loket Castle, iqela lezifundo igalufa, yiku Arena enedama lokudada (kwakhona ngaphandle ehlotyeni) kunye iholo ngemiba yezemfundo, Ohře amanzi umzila, iKrismesi ndlu - Doubí Chateau, Aberg Umlindi inyango, Goethe yinqaba ende, le Cross, Museum of Dr. Becher, iBecher's Villa, iDiana Lookout Tower, iButterfly House, iDeer Leap Viewpoint, iCawa yeOthodoki yaseSt. UPetros noPawulos, iCawa yaseSt. Mary Magdalene, Karlovy Vary City Theatre, Art Gallery, Moser Glassworks, Moser Museum, Bečov Castle kunye neChateau, Chýše Chateau, Horní Hrad kunye nezinye iidolophu ze-spa - Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Jáchymov, Kynžvart Spa - Iziko le-Hory kunye ne-Kru Dar, Klínovec, Pernink kunye kakhulu .... lokuphola ezintsonkothileyo Rolava.
Unokuthatha isitshixo kwindlu kwindawo ekhuselekileyo, ikhowudi yokhuseleko ithunyelwa nge-SMS, i-imeyile, i-whats, njl .... Ukhuseleko lunokusetyenziswa kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho, kwaye izitshixo zinganikezelwa ngale ndlela.